८ मार्च मंगलबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । बेलायतमा पनि विविध कार्यक्रम गरिए । प्रवासी नेपाली मञ्च बेलायत देखि गैर आवासीय नेपाली संघ महिला फोरमले समेत नारी दिवस आ आफ्नै ढंगले मनाए ।...
धेरै वर्ष बेलायतमा रहेर संसदीय व्यबस्थाको अनुभूत गर्दा सायद यहांको विकासको खम्बा भनेको राजनीतिक संस्कार, इमान्दारिता, कर्तब्यपरायणता र आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता नै हो भन्ने लाग्छ । पहिलो पुस्ताका नेपाली बिदेशमा बसेर धसिनु भनेको प्रमुख...
जीवन: जीवन के हो भनेर विश्वका दार्शनिकहरू घोत्लिएको शताब्दीऔं भइसक्यो । यो सरल प्रश्नको उत्तर भने कठिन छ । यसको उत्तर प्याजको बोक्रा छोडाए जस्तो, आंधी आउनु अगाडिको सन्नाटा जस्तो, भर्खरै प्रेमीले धोका दिएको...
आत्मीय दाजु नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ होला । ढिलै भएपनि एन.आर.एन.ए. यूकेको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा दाजुलाई वधाई टक्र्याउंछु । दाजु हजुर कम बोल्ने, मिजासिलो, काम गरेर देखाउन सक्ने मान्छे भनेर चिनिनु हुन्छ । हामीलाई...
जब मैले शान्ता चौधरी भेटें
मैले कतै देखे सुनेको र पढेको नाममात्र थियो शान्ता चौधरी । अखवारमा मैले चाल पाएकी थिएं शान्ता चौधरी कमलरी थिइन्, पछि सभासद भइन् । उनले लेखेको ‘कमलरी देखि सभासदसम्म’ पुस्तकले चर्चा बटुलिरहंदा म बेलायतको...
पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको असामयिक मृत्युको खवरले नेपाली काँग्रेसजनहरु मात्र नभै समग्र देशप्रेमी नेपालीहरुलाई मर्माहत बनाएको छ । उनी कस्ता थिए, उनी के थिए, कति साधा थिए, पदका लागि लोभी थिए वा थिएनन्, उनले...
औद्योगिक क्रान्तिको शिक्षा
जुनसुकै देशको विकासको लागि सवल अर्थतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा आर्थिक नीतिबारे चर्चा परिचर्चा उति हुंदैन जति हुनुपर्छ । चाहेको जस्तो सम्वृद्ध देश हुनको लागि सबैको आ-आफ्नो भूमिका रहन्छ । राजनैतिक नेतृत्व गर्नेले इमान्दारिता,...
दूतावासमा सधैं झुल्किने अनुहारहरु
अक्सर दूतावासको निमन्त्रणा कमै आउंछ । अरु त खुब गएको देख्छु । समय, परिस्थिति अनुसार जानु स्वभाविक हो जानु पनि पर्छ । म आमन्त्रित लिष्टमा परिन भनेर मेरो गुनासो हुंदै होइन । मेरा पाठकहरुलाई अवगत...
विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरुस्कार थाप्न डा रामशरण महत सोमबार लन्डन आइपुगेका छन् । यसरी सात समुन्द्रपारी आएर पुरुस्कार थाप्नु भनेको समस्त नेपालीको लागि गर्बको कुरा हो । यिनको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने धेरै कुरा भएपनि समकालीन...
भनिन्छ युवा देशको मेरुदण्ड हुन् । कुनै पनि देश विकास हुन युवा जनशक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ । घाइते अनि पाको उमेरका बा आमालाई त आफ्ना बुढेसकालको सहारा छोरा छोरीको आश लाग्छ भने जननीलाई पनि...
नेपाल एकीकरण – राष्ट्र निर्माण कि युद्ध अपराध ?
विश्व इतिहास र समाजलाई गहन र विश्लेषनात्मक तवरले खोज र अनुसन्धान गर्ने हो भने विचार र समयले मानव सभ्यतालाई, यसको भूगोललाई, रितिरिवाज र परम्पराहरुलाई अचम्मलाग्दो गरि बदलिदिएको छ । थाहा छैन् विचारले समयलाई वा...
स्वस्थ्यकर खाना क्रियाशील जीवन
राम्रो खानाले वर्तमान र भविष्यको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पार्दछ । यसले आत्मघाती मुटुरोग र क्यान्सर जस्ता रोगहरूको जोखिमबाट बचाउन सक्छ । यसले वजन वढ्न पनि कम गर्दछ किनभने वजन धेरै बढीको मतलव मधुमेय, वाथ...
« अघिल्ला 1 … 18 19 20 21 22 … 27 पछिल्ला »